Yugyan Daily » म्याग्दीमा फेरि २ जनामा डेंगु देखियो , संक्रमितको संख्या ९
(आज) भेटिएका दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
म्याग्दीमा फेरि २ जनामा डेंगु देखियो , संक्रमितको संख्या ९
हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि खोजी र नष्ट अभियान सञ्चालन
बैशाख २६ गते २०७७
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच म्याग्दीमा शुक्रबार थप २ जनामा डेंगु सक्रमण फेला परेको छ। योसँगै वैशाख महिनामै म्याग्दीमा डेंगु संक्रमितको संख्या ९ पुगेको छ। बेनी नगरपालिका ५ भीरमुनि र बेनी नगरपालिका ६ छापाका दुई युवामा डेंगु पोजेटिभ देखिएको अस्पतालका क्लिनिकल प्रमुख डा. नवराज बस्ताकोटीले जानकारी दिए। ‘डेंगुको उच्च जोखिममा छौ, यस वर्ष हामीलाई डेंगुले सताउने संकेत देखिएको छ’, डा. बस्ताकोटीले भने। गतहप्ता समेत भीरमुनि र छापामा दुई जनामा डेंगु देखिएको थियो।
योसँगै बेनी नगरपालिकामा ६, मंगलामा २ र मालिका गाउँपालिकामा १ जनामा डेंगुका बिरामी भेटिएका छन्। शुक्रबार (आज) भेटिएका दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीमा मनोविज्ञानमा असर पर्ने भएकाले स्वस्थ्यकर्मीले संक्रमितको नाम र थरबारे जानकारी दिएका छैनन्। डेंगुले प्रकोपको रूप लिनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी नगरभित्रका वडाहरुमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको बासस्थान खोजी नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्र पारेको छ।
खोजी र नष्ट अभियान
हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि खोजी र नष्ट अभियान सञ्चालन गरिएको छ। बेनी नगरपालिकामा एक हप्ताको अवधिमा नै ६ जनामा डेंगु पेजेटिभ भेटिएसँगै डेंगु सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको हो। डेंगु नियन्त्रणको योजना बनाउन वडास्तरमा अभिमुखीकरण सहित टोलटोलमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइएको छ।